အဖမ်းခံထားရတဲ့ ဆရာလင်းညို့တာရာရဲ့ ဟောချက်ထဲက နံပါတ် ၁၀ နဲ့ ၁၄ တကယ်ဖြစ်လာပြန်ပြီ
November 24, 2021 Ko Khit 0
အဖမ်းခံထားရတဲ့ ဆရာလင်းညို့တာရာရဲ့ ဟောချက်ထဲက နံပါတ် ၁၀ နဲ့ ၁၄ တကယ်ဖြစ်လာပြန်ပြီ စစ်အာဏာရှင်ကျဆုံးရေး လူမှုကွန်ရက်တွင် အစီအရင်များ တင်သဖြင့် နိုင်ငံတော်အကြည်ညို ပျက်စေမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသော ဗေဒင်ပညာရှင် လင်းညို့တာရာ၏ ၂၀၂၁ ရှေ့ဖြစ်ဟောကိန်း ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ စစ်အာဏာသိမ်းကောင်စီ၏ အာ ဏာသိမ်းမှုကို […]
ဒီ အိမ်မက် ၅ ခု မက်ရင် လုံးဝလျစ်လျူမရှုထားသင့်ပါဘူး
September 25, 2021 Ko Khit 0
ပညာရှင်တွေပြောတဲ့ လုံးဝလျစ်လျူမရှုထားသင့်တဲ့ အိမ်မက် ၅ ခုနဲ့ အဓိပ္ပါယ် အိမ်မက်ပညာရှင်တွေအဆိုအရ အိမ်မက်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝနဲ့မသိစိတ်တွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပက်သက်တဲ့အရေးကြီးအချက်အလက်တွေကို ပြောပြနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အိမ်မက်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုထိုးထွင်းသိစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအိမ်မက်တွေဟာ မကြာခန ဒါမှမဟုတ် ရံဖန်ရံခါ မက်လေ့ရှိကြောင်း သင်သတိထားမိကောင်းထားမိပါလိမ့်မယ်။အိမ်မက်တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး သူ့လူမျိုးရိုးရာဓလေ့အရ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပုံတွေ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ ခုပြောပြချင်တာက Oneirologyလို့ခေါ်တဲ့ အိမ်မက်တွေနောက်ကွယ်က […]
ပြည်သူ့အောင်ပွဲ ၇ရက်သာလိုတော့တယ်လို့ရဲရဲကြီး ဆိုလာတဲ့ စာရေးဆရာမ မေသင်္ကြန်ဟိဏ်း
September 24, 2021 Ko Khit 0
ပြည်သူ့အောင်ပွဲ ၇ရက်သာလိုတော့တယ်လို့ရဲရဲကြီး ဆိုလာတဲ့စာရေးဆရာမ မေသင်္ကြန်ဟိဏ်း ပြည်သူက မအလတို့အဖွဲ့ကို ၇၀% နိုင်နေပါပြီ။ ကျန်တဲ့ ၃၀% မှာ ၁၅%ကို နိုင်လိုက်တာနဲ့ ၁၅% ကအလိုလိုအရှုံးပြုတ်ကျသွားမှာပါ။ အဲဒါကို သိလို့ ပြည်သူ့အောင်ပွဲရနေပြီး အပြတ်အသတ် နိုင်ဖို့ သိပ်မလိုတော့ ဘူးလို့ပြောရဲတာပါ။ ကျမအယူအဆပြောရရင် နိုင်ငံရေးမှာ ၁၀၀% […]
သတိမထားမိတဲ့ လူသိနည်းသော နိမိတ်များ
၁။ အိမ်ရှေ့ တရော်ထုပ် မချိတ်ပါနှင့်။ အိမ်ရှိလူများ ကျမ်းမာရေး ညံ့တတ်၏။ ၂။ စားပွဲပေါ် ဖိနပ် မတင်ပါနှင့်။ ဖိနပ်ပိုင်ရှင် ထိုအိမ်မှ ထွက်ခွာသွားရတတ်၏။ ၃။ ဓါး ကတ်ကြေး လက်ဆောင်မပေးပါနှင့်၊၊ ကိုယ့်လာပေးလျှင်လည်း ငွေအနည်းငယ် စတိ ပြန်ပေးပါ။ ထိုသူနှင့် ဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး […]
သင့်စရိုက်ဟာ အောက်ပါအချက်များနဲ့ ကိုက်ညီပါသလား…?(၁မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ)
September 13, 2021 Ko Khit 0
ဒီစာဖတ်သောမိတ်ဆွေ၊ သင့်စရိုက်ဟာ အောက်ပါအချက်များနဲ့ ကိုက်ညီပါသလား…? ” သင့်မှာ တစ်ခြားသောလူတွေ ကိုယ့်ကို နှစ်သက်မြတ်နိုးစေချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိတယ်။ သင်ဟာသင်ကိုယ်တိုင် နှိုင်းချိန်ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့ အသိရှိပါတယ်။ သင့်မှာ ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးမပြုရသေးတဲ့ စွမ်းရည်တွေ ကိန်းအောင်းနေတယ်လို့ ခံစားရတယ် ။ သင့်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အားနည်းချက်တချို့ ရှိပေမယ့် ဒီအားနည်းချက်နဲ့ […]